Gulf Air inotangazve nendege kubva kuBahrain kuenda kuMoscow Domodedovo Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Gulf Air inotangazve nendege kubva kuBahrain kuenda kuMoscow Domodedovo Airport
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mutakuri wenyika yeHumambo hweBahrain anotangazve ndege dzakarongwa dzevatakuri kuenda kuRussian Federation.
Ndege dzinobva kunzvimbo yemhepo kuenda kuBahrain dzichaitwa vhiki nevhiki neMugovera neMuvhuro.
Musi weMugovera, kusvika muDomodedovo kuri 14:05, kuenda kuri 14:50.
PaMuvhuro, kusvika ndi07: 10, kusimuka na08: 00.
Kubva munaAugust 14, 2021, mutakuri wenyika yehumambo hweBahrain akatangazve nendege kubva kuMoscow Domodedovo Airport.
Ndege dzinobva kunzvimbo yemhepo kuenda kuBahrain dzichaitwa vhiki nevhiki neMugovera neMuvhuro. Musi weMugovera, kusvika muDomodedovo kuri 14:05, kusimuka kuri pa14: 50 *. PaMuvhuro, kusvika ndi07: 10, kuenda kuri 08: 00 *.
Gulf Air uye Moscow Domodedovo Airport vanga vachishandira pamwe kubva 2014. MunaGunyana 2017, nendege dzakawedzerwa kuve dzemazuva ese nekuda kwekubudirira kwenzira. Muna Kurume 2019, nendege dzinoenda kuBahrain dzakamiswa nekuda kwekuvharwa kwenyika dzese traffic traffic nekuda kweCovid-19. Kubva kutanga kwekudyidzana kwayo neDomodedovo Airport, Gulf Air yakaita 2,732 kutora uye kumhara mashandiro uye yakatakura vafambi zana nemakumi masere neshanu munzira yakatarwa.
Bahrain nzira yakasarudzika yeMoscow nendege hub, iyi yemhepo mutsetse inopa dzakasiyana siyana nzvimbo dzakasiyana dzeimwe yeakakura nzira network muMiddle East.
Gulf Air ndeyenyika-yendege nendege uye mureza anotakura iwo Humambo hweBahrain. Inotungamirwa muMuharraq, iyo ndege inoshanda nendege dzakarongwa kuenda kunzvimbo makumi mashanu neshanu munyika makumi maviri nesere muAfrica, Asia, neEurope. Iyo huru hub ndeye Bahrain International Airport.
* nguva yekuenda / yekuuya inoratidzwa munguva yeMoscow